စပါးပျိုး သက်နုနု ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးနည်း စနစ် လက်တွေ့ သရုပ်ပြအဖြစ် တာလေ၌ စိုက်ပျိုး | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
စပါးပျိုး သက်နုနု ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးနည်း စနစ် လက်တွေ့ သရုပ်ပြအဖြစ် တာလေ၌ စိုက်ပျိုး
Writen by Web Admin 6:20:00 PM -0Comments
တာချီလိတ်၊ ဇွန် (၂၉)
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ စပါးပျိုးသက်နုနု ပျိုးထောင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် သရုပ်ပြ စိုက်ပျိုး ခြင်းအား ဇွန်လ(၂၈)ရက်၊ နံနက်(၉)နာရီက တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာလေမြို့၊ နားယောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ၀မ်ဆာကျေးရွာ ကွင်းအမှတ်(၆၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၉)ရှိ တောင်သူ ဦးစိုင်းလုံ၏ လယ်မြေ(၁)ဧကတွင် သရုပ်ပြ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်း တာချီလိတ်ခရိုင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ အများဆုံးနေထိုင်တာက ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ၊ ဒါကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးလက်ပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုစီးပွားဘ၀တွေကို အချိန်တိုတိုအတွင်း ထိထိမိမိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်တာပါ"ဟု စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှပြောသည်။
အစိုးရ၏ ရက်(၁၀၀)စီမံချက်ဖြင့် တာလေစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖေါ် စိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သရုပ်ပြစိုက်ပျိုးပွဲတွင် ခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှဝင်း၊ ခရိုင်မြေအသုံးချရေး၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံများနှင့် ၀န်ထမ်းများ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အကျိုးဆောင်တောင်သူ(၂၅)ဦး တို့မှ လက်တွေ့ သရုပ်ပြ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ် ခရိုင်အတွင်း မြို့ပေါ်နေလူဦးရေမှာ (၉,၀၆၈)ဦးနေထိုင်ပြီး? ကျေးလက်နေလူဦးရေမှာ (၁၅,၃၂၆)ဦးရှိကြောင်း နှင့် တာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်း အဓိက သီးနှံ(၁၀)မျိုး စိုက်ပျိုးပြီး မိုးစပါး စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် ဧကမှာ ဧကပေါင်း (၁၇,၀၀၀)ကျော်ရှိကြောင်း တာချီလိတ်ခရိုင် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
တာခြီလိတျ၊ ဇှနျ (၂၉)
စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာန၏ စပါးပြိုးသကျနုနု ပြိုးထောငျ စိုကျပြိုးနညျးစနဈ သရုပျပွ စိုကျပြိုး ခွငျးအား ဇှနျလ(၂၈)ရကျ၊ နံနကျ(၉)နာရီက တာခြီလိတျခရိုငျ၊ တာလမွေို့၊ နားယောငျးကြေးရှာအုပျစု၊ ဝမျဆာကြေးရှာ ကှငျးအမှတျ(၆၃)၊ ဦးပိုငျအမှတျ(၆၉)ရှိ တောငျသူ ဦးစိုငျးလုံ၏ လယျမွေ(၁)ဧကတှငျ သရုပျပွ စိုကျပြိုးခဲ့ကွောငျး တာခြီလိတျခရိုငျ စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသညျ။
"မွနျမာနိုငျငံမှာ လူဦးရေ အမြားဆုံးနထေိုငျတာက ကြေးလကျဒသေတှမှော၊ ဒါကို စဉျဆကျမပွတျ ဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ ကြေးလကျပွညျသူတှရေဲ့ လူမှုစီးပှားဘဝတှကေို အခြိနျတိုတိုအတှငျး ထိထိမိမိ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစဖေို့အတှကျ ဆောငျရှကျတာပါ"ဟု စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးမှပွောသညျ။
အစိုးရ၏ ရကျ(၁၀၀)စီမံခကျြဖွငျ့ တာလစေိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အကောငျအထညျဖျော စိုကျပြိုးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး၊ သရုပျပွစိုကျပြိုးပှဲတှငျ ခရိုငျစိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာန မှ လကျထောကျ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးလှဝငျး၊ ခရိုငျမွအေသုံးခရြေး၊ သီးနှံကာကှယျရေးတာဝနျခံမြားနှငျ့ ဝနျထမျးမြား၊ ကြေးရှာအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူး နှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြား၊ အကြိုးဆောငျတောငျသူ(၂၅)ဦး တို့မှ လကျတှေ့ သရုပျပွ စိုကျပြိုးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
တာခြီလိတျ ခရိုငျအတှငျး မွို့ပျေါနလေူဦးရမှော (၉,ဝ၆၈)ဦးနထေိုငျပွီး? ကြေးလကျနလေူဦးရမှော (၁၅,၃၂၆)ဦးရှိကွောငျး နှငျ့ တာခြီလိတျခရိုငျအတှငျး အဓိက သီးနှံ(၁၀)မြိုး စိုကျပြိုးပွီး မိုးစပါး စိုကျပြိုးနိုငျသညျ့ ဧကမှာ ဧကပေါငျး (၁၇,ဝဝဝ)ကြျောရှိကွောငျး တာခြီလိတျခရိုငျ ဒသေဆိုငျရာ အခကျြအလကျမြားအရ သိရသညျ။